tsika dzedu zvebhizimisi hunoratidza tsika yedu utsanzi, preciseness, nomwoyo wose, kudziongorora.
Innovation-ndiwo simba motokari Nuoya kutanga. Abudirire yedu inoramba kuva kunopfuurira kusimudzira pfungwa itsva uye pfungwa. Tinogara vanoomerera kumisa kuenzana kukosha zvose kutarisirwa uye tsika. Chekambani kukura uye zvizivikanwe kuti kusimudzirwa zvose vari chichiitwa utsanzi rikurumidze.
Preciseness-ndiwo maitiro rwokugadzira nyika Nuoya. We akanamatirana zvakaoma uye zvakasimba nheyo "vanhu vaifarira, kuchipedza, nemamwe manyorerwo", akaumba yayo zvechadenga tsika yezvinhu. Sezvo yekare tsumo, "wakarebesa rwendo rinotanga danho chete", simba anowana sezvo zvose, kubva mbishi zvinhu kudanda, gungano kubudiswa kuti debugging uye ongororo, zvakasimba maererano mukugadzira kurongedza zvinodiwa. zvigadzirwa edu tengesa zvakanaka mhiri nyika, kunyanya Africa, Middle East uye Asia, kunakidzwa mukurumbira wakanaka.
Kutendeseka-ari pakona inogona kuenderera mberi. Kutenda Good wakanaka tsika akasara kubva kare nakare kusvikira nhasi uye kunyange zvakawanda hwaro kuramba kukura akaitwa. Customer chivimbo uye kugutsikana wedu guru kufuridzirwa. Tichafara conciliate wakapamhama yeGmail.END_STRONG kuvimba nokutsigira pamwe zvinhu zvedu hwakanaka uye yepamusoro basa.
Ubanguranyika-wedzerai nzira Nuoya. Kuburikidza kuramba chekudzidza uye kurovedzwa kuvandudza pachavo, kukurudzira Nuoya makwikwi uye pave kubvuma uye unyanzvi yemavara zvinopa akanakisisa mabasa uye unhu edu vatengi.
The rakaisvonaka zvebhizimisi tsika kunotiita unremitting kuita uye akava ibwe rekona zvavakanga vachida kuita kutsigira kutsanya inogona kuenderera mberi mune ramangwana.